ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး, ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုး, ဗီနိုင်းတစ်ပိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုးထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း - SAM ကို-ဗြိတိန်
ကျနော်တို့တရုတ်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာအရှိဆုံးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ Utah ကုန်းပတ်တည်ဆောက်အချို့ကိုအဖြစ်လူသိများ။ ကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးတပ်ဆင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ခြွင်းချက်အာမခံကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့, အကြမ်းခံထုတ်ကုန်များတွင်ကိုယျ့ကိုယျကိုဂုဏ်ယူ။
Zhuoxin ဗီနိုင်း Industries, ဓားရေးပြိုင်ပွဲထုတ်ကုန်များအတွက်သင့် One Stop Shop Be ဂုဏ်ယူ Is
ထပ်မံကြည့်ရှုရန် & GT;
ကျနော်တို့စသည်တို့ကိုသီးသန့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုး Semi-သီးသန့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုး, မြင်းမွေးမြူရေးခြံခြံစည်းရိုး, picket ခြံစည်းရိုးကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်အိမ်, လမ်း, ခြံ, ကျောင်း, မြင်းပြိုင်ပွဲများတွင် အသုံးပြု. အလှဆင်, ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်အတွက်အထူးပြုဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြံစည်းရိုးထဲကတစ်ခုအပိုင်းများအတွက်, 36 & quote ;, 48 & quote ;, 60 & quote; သို့မဟုတ် 72 & quote; ကျွန်တော်တို့ဟာ 86 & quote ရှိမြင့်မားသောအဘို့, ခြံစည်းရိုး၏သာမန်အမြင့်အဖြစ်ရွေးချယ်သည်, သို့မဟုတ် 96 & quote; အမြင့်;6'သို့မဟုတ် 8' 'ခြံစည်းရိုး၏ပုံမှန်ကျယ်ပြန့်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခြံစည်းရိုး၏ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားများအတွက်စိတ်ကြိုက်အဆိုပါကိုလည်းကြိုဆိုသည်။
ကျနော်တို့ကျယ်ပြန့်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်, စင်္ကြံ, အထပ်သားစသည်တို့ကိုများတွင်အသုံးပြုထားသည့်ဗီနိုင်းရထားလမ်း, များစွာသောအမျိုးမျိုးနှင့်အရောင်များရှိ
ဗီနိုင်းလက်ရန်းဆိုင်ရာသူတို့ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်ထံမှအားလုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မချိတ်ဆက်နှင့်ခိုင်ခံ့သောစုဝေးချောမွေ့စွာရှိပါသည်, သတ္တု pickets သို့မဟုတ်ဖန် pickets နှင့်အတူ collocated နိုင်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး-ဖော်ရွေ, လွယ်ကူသောပရိသတ်၌အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူစိုက်ပျိုး box ကိုသေးငယ်တဲ့ခြံစည်းရိုး, နိမိတ်လက္ခဏာပို့စ်, ပြင်ပ PVC အိမ်သာတဲစသည်တို့ကို, လှပသောရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်, ရှည်လျားတသက်တာအသုံးပြုမှုလိုပဲ။
သင်တစ်ဦးခြံစည်းရိုးတပ်ဆင်မှာကောင်းသောလျှင်ဒါ, သင်သာသင်လိုချင်သောအစိတ်အပိုင်းများ DIY များနှင့်ဝယ်ဖို့လိုပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးကိုနှင့်စျေးကွက် သိ. ...
Zhuoxin စာရင်းကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အားလုံး
မဆိုပြဿနာတွေနဲ့ feedbacks ပါလိမ့်မည် ...
ဗီနိုင်း Ethylene နှင့်ကလိုရင်း (သဘာဝတ္ထုများဖြစ်ကြသည်နှစ်ဦးစလုံး၏) မှဖန်ဆင်းတဲ့ဒြပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါအဲဒီတ္ထုများကိုလည်းလေ့ "ဗီနိုင်း" အဖြစ်ရည်ညွှန်းသော PVC, အဖြစ်လူသိများ polyvinyl Chloride, ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ယနေ့ဗီနိုင်းသည့်အတွက် 2nd အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်ရောင်းချပလပ်စတစ်ဗဓေလသစ်ဖြစ်ပါတယ်
တစ်ဦး picket ခြံစည်းရိုးကိုဘယ်လိုမြင့်မားဖြစ်သင့်
Wood က & သံခြံစည်းရိုး vs ဗီနိုင်း
သင့်ရဲ့ဥယျာဉ်သို့မဟုတ်မွေးမြူရေးခြံ decorating သည့်အခါဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်: အဘယျသို့ပစ္စည်းခြံစည်းရိုးကိုရွေးချယ်သလဲ? သစ်သား, သံ, ဒါမှမဟုတ်ဗီနိုင်း? ဤဆောင်းပါးသည်ငါသင်သည်သင်၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းကူညီနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်, သုံးမျိုးပစ္စည်းများလုပ်ထားတဲ့ခြံစည်းရိုးတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလှအပ: ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး> သံခြံစည်းရိုး> သစ်သား fenceIt အားလုံးမူတည်
သင်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကိုရှာဖွေချင်ပါသလား သာ. ကြီးမြတ်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်ကမ်းလှမ်းစဉ်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးတံခါးတို့ကိုသင့်ဟင်းလင်းပြင်မှပျော်စရာတွေအများကြီးထည့်ပါ။ ယခုမှာဗီနိုင်းပစ္စည်းများ၏အိမျအလှဆင် ပို. ပို. လူကြိုက်များလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဝင်းမှအလှဆင် add ချင်တယ်ဆိုရင်, ဗီနိုင်းမြို့တံခါးတို့ကိုပစ္စည်းများထဲမှဖြစ်စေခြင်းငှါ